Ukwanda okumangalisayo kweTrafikhi yeeNqwelo moya
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » isikhululo » Ukwanda okumangalisayo kweTrafikhi yeeNqwelo moya
isikhululo • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseJamani zokuPhula • iindaba • Cinezela iZaziso • Technology • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel
Agasti 3, 2021
IFraport AG ibeka ngempumelelo inqaku lesithembiso
Ngethuba lokuqala okoko kwaqhambuka ubhubhane we-coronavirus, iFraport iphinde yafumana iziphumo zeQela (inzuzo iyonke) kwisithuba sokunikezelwa kwengxelo-exhaswa kukunyuka kwemfuno kunye neendleko ezincitshisiweyo, kunye nokuhlawulwa kwembuyekezo kurhulumente.
Ingxelo yeThutyana yeQela le-Fraport-Isiqingatha sokuqala 2021:
Kwisiqingatha sokuqala sika-2021, ukuHamba kweTrafikhi ngokuBonakalayo Kwizikhululo zeenqwelo moya e FRAPORT
Inani labakhweli elinyukayo ngexesha lokuhamba kwehlobo-Iindleko zincitshiswe kakhulu-I-Fraport ifumana iziphumo ezincumisayo zeqela ngenxa yesiphumo esinye
Ukusebenza kweshishini lenkampani yesikhululo seenqwelomoya iFraport kuqhubekile kuchaphazeleka ngubhubhane weCovid-19 kwiinyanga ezintandathu zokuqala zika-2021. Ukulandela ikota yokuqala ebuthathaka, amanani ezithuthi aphawuleka kwakhona kwikota yesibini ka-2021 kuwo onke amaqela eQela Izikhululo zeenqwelo moya emhlabeni jikelele.
Umphathi we-Fraport AG, uGqr. Stefan Schulte, uthe: “Imbuyekezo yobhubhane evela kurhulumente wase-Jamani kunye noRhulumente wase-Hesse iyasomeleza isiseko sokulingana. Oku kusenza ukuba sikwazi ukuqhubeka notyalo-mali lwethu kukhuseleko lwemozulu kunye neeprojekthi zophuhliso lwezixhobo. Kwangelo xesha, sinciphise iindleko zethu kakhulu. Ngenxa yoko, isiphumo sethu sokusebenza sibuyele mnyama kwakhona. Kananjalo enkosi kwizikhundla zethu ezibanzi neziziintlobo ngeentlobo zesikhululo seenqwelomoya, iFraport Group ikwindawo entle ukuba ixhamle kwinto ekulindeleke ukuba iphinde ibuyele kuhambo lwasemoyeni. ”
Ukunyuka kwezithuthi zabakhweli ngokuqaphelekayo
NgoJuni 2021, inani labakhweli kwisikhululo senqwelomoya saseFraport kwisikhululo senqwelomoya (i-FRA) sonyuke ngokuqaphelekayo-sonyuka phantse ngama-200 eepesenti unyaka nonyaka kubahambi abayi-1.8 yezigidi. Amanani okuqala abonisa ukuba le meko iqhubekile ngoJulayi, kunye nokugcwala kwabantu nge-116 yeepesenti ukuya kuthi ga kwizigidi ezi-2.8 zabakhweli. Ukuhamba kwabahambi nge-FRA ngeentsuku zokuphakama ngoku kufikelela kwiipesenti ezingama-50 zenqanaba elibhalisiweyo ngonyaka werekhodi yangaphambi kobhubhane ka-2019.
Ebhekisa kwiziphumo zokukhula kwetrafiki kunye nokunyuka kokusebenza kwesikhululo seenqwelomoya, u-CEO Schulte ucacisile: "Ukwanda okuthe kratya kwezithuthi kubangela imiceli mngeni ekusebenzeni kwesikhululo senqwelomoya saseFrankfurt, kuba izithuthi zixinene kakhulu ngamaxesha aphezulu emini. Ukongeza, amanyathelo angoku okulwa i-Covid afuna ixesha elininzi kunye nezixhobo zeenkqubo zesiphelo kunye nemisebenzi yokuphatha umhlaba. Ukusebenza ngokusondeleyo namaqabane ethu, siyaqhubekeka ukuphucula iinkqubo, ngelixa silungelelanisa amandla ethu nokuhla kunyuka kwemfuno. ”
Ngaphandle kwendlela elungileyo ebonwe kwezi veki zimbalwa zidlulileyo, i-FRA isabhalisile ukwehla kwezithuthi kweepesenti ezingama-46.6 unyaka nonyaka ukuya kubagibeli abaphantse babe zizigidi ezi-6.5 ngalo lonke ixesha likaJanuwari ukuya kuJuni 2021. Oku kungenxa yokuba, kwakwinyanga enye ezintandathu kunyaka ophelileyo, ubhubhane weCovid-19 waqala ukuba nefuthe elibi kwezothutho ukusukela phakathi ku-Matshi 2020 ukubheka phambili. Xa kuthelekiswa namanani erekhodi afezekisiweyo kwisiqingatha sokuqala se-2019 yangaphambi kobhubhane, i-FRA ibhalise iipesenti ezingama-80.7 zokuhla kwezithuthi kwisiqingatha sokuqala sonyaka ka-2021. unyaka-ukuya phantse kwi-27.3 yezigidi zeetoni ukusuka ngoJanuwari ukuya kuJuni 1.2 (ukuya kuthi ga kwiipesenti ze-2021 xa kuthelekiswa nelo xesha linye ngo-9.0). Kwizikhululo zeenqwelo moya zeQela laseFraport kwihlabathi liphela, ukugcwala kwabantu kukhule ngokuphawulekayo kwakhona ngoJuni 2019, kodwa ukugcwala kwabantu bonke kwisiqingatha sokuqala kuhlala kungaphantsi kwenqanaba lonyaka ophelileyo.
Ingeniso iyancipha kancinane - Iziphumo ezincomekayo ezinokubangelwa ziintlawulo zikarhulumente
Ebonakalisa uphuhliso lwezithuthi ngokubanzi, ingeniso yeQela likaFraport yehle nge-10.9 yeepesenti ukuya kwi-810.9 yezigidi kwisiqingatha sokuqala sika-2021. Ukulungelelanisa ingeniso evela kulwakhiwo ngokunxulumene nenkcitho yemali eyaneleyo kwinkxaso-mali yeFraport kwihlabathi liphela (ngokusekwe kwi-IFRIC 12), ingeniso yeqela yehle nge-8.9 Ipesenti ukuya kwi-722.8 yezigidi. “Enye ingeniso” kaFraport ichaphazeleke ngokufanelekileyo sisivumelwano soorhulumente baseJamani noRhulumente waseHesse sokuba banike uFraport imbuyekezo ngokulungela ukusebenza kwe-FRA ngexesha lokuvalwa kwe-coronavirus yokuqala ngo-2020. Iqela le-EBITDA. IFraport ilindele ukufumana intlawulo kwisiqingatha sesibini sowama-159.8. Oku kungena kwemali kuya kuba nefuthe elihle kwityala leQela nakwityala lemali.
Ipalamente yase-Greek iyamkele imbuyekezo e-Fraport (phantsi kwesivumelwano semvumelwano) ngelahleko yokusebenza eyenzeke ngo-2020 kwizikhululo zeenqwelomoya ezili-14 zamaGrike ngenxa yobhubhane. Ngokukodwa, i-Greek State ivumile ukurhoxisa umrhumo osisigxina we-Fraport, ngokusekwe kwinani lezithuthi ezifunyenweyo. Ngapha koko, iFraport yanikwa urhoxiso lwethutyana lokuhlawula umrhumo wemvume eyahlukeneyo. Kwisiqingatha sokuqala sika-2021, oku kuguqulelwe kwimpembelelo elungileyo ye- € 69.7 yezigidi kwenye ingeniso yokusebenza yeFraport kunye neQela le-EBITDA.
Ukongeza, isivumelwano esenziwe kwikota yokuqala ka-2021 phakathi kweFraport kunye namaPolisa aseJamani (Bundespolizeikwimivuzo yeenkonzo zokhuseleko lokuhamba ngenqwelomoya - enikezwe yiFraport kwixa elidlulileyo-yenze ingeniso ye- $ 57.8 yezigidi, ethe yanefuthe elihle kwiQela le-EBITDA ngesixa esifanayo.
Iindleko zokusebenza zincitshiswe kakhulu - Iziphumo zeQela eliPhucukileyo ziye zafunyanwa
Ngenxa yokunyuka kwenqwaba yeemoto, iFraport inciphise umsebenzi wexeshana wabasebenzi abasebenza kwisikhululo senqwelomoya saseFrankfurt (esaziswa phantsi kweJamani Umsebenzi wexeshana Inkqubo ekuphenduleni ubhubhane). Izibonelelo zezikhululo zeenqwelomoya ezingasetyenziswanga okwethutyana ngenxa yobhubhane sele zibuyiselwe ekusebenzeni-kubandakanya iTheminali ye-FRA 2. Ngaphandle kwala manyathelo mvanje, iFraport isakwazi ukunciphisa iindleko zokusebenza eFrankfurt ngolawulo olungqongqo lwendleko malunga neepesenti ezili-18 kwisiqingatha sokuqala se 2021. Kwiinkampani zeQela ezihlanganisiweyo ezipheleleyo zeFraport kwihlabathi liphela, iindleko zokusebenza zancitshiswa malunga neepesenti ezili-17 kwisithuba sokunikezelwa kwale ngxelo.
Ixhaswe ziziphumo zokuhlawulwa kwembuyekezo, Iqela le-EBITDA lifikelele kwi- € 335.3 yezigidi, ngaphezulu kwesiqingatha sokuqala sonyaka ophelileyo se-EBITDA ye- $ 22.6 yezigidi nge- € 312.7 yezigidi. Ngaphandle kweziphumo ezizodwa, iQela liye lafumana iziphumo ezincumisayo kwisiqingatha sokuqala sika-2021.
Iqela le-EBIT lifikelele kwi- € 116.1 yezigidi kwixesha lokunika ingxelo, ukusuka kwi- $ 210.2 yezigidi kwisiqingatha sokuqala sika-2020. Iziphumo zemali ze-minus € 96.2 yezigidi zahlala ziphantse zalingana nesiqingatha sokuqala kunyaka ophelileyo (H1 / 2020: minus € 98.7 yezigidi). Nangona isiphumo semali sixhamle kwigalelo elibonakalayo le-35 yezigidi zeerandi kwiinkampani ezidityanisiweyo e-Equity, oku akunakulinganisa ukunyuka kwe- $ 37 yezigidi kwiindleko zenzala ezibangelwe kukunyuka kwemali.
Iqela le-EBT liphuculwe laya kwi-19.9 yezigidi kwisiqingatha sokuqala se-2021 (H1 / 2020: thabatha i-308.9 yezigidi). Iziphumo zeqela okanye inzuzo eyenyuka inyuke yaya kwi-15.4 yezigidi zeerandi (H1 / 2020: thabatha i-231.4 yezigidi).
Ngokuqukunjelwa kwesiqingatha sokuqala sonyaka ka-2021, ibhodi elawulayo yeFraport isalindele ukugcwala kwabakhweli kwisikhululo senqwelomoya iFrankfurt ukusuka kwizigidi ezingaphantsi kwezigidi ezingama-20 ukuya kuma-25 kunyaka opheleleyo ka-2021. Ipotifoliyo kulindeleke ukuba ibone ukubuyisa ngakumbi kunendlela eFrankfurt. Ingeniso yeqela nayo kulindeleke ukuba ifike malunga ne-2 yezigidi zeerandi kwi-2021.
Ukuhlawulwa kwembuyekezo yesibetho eyi- € 160 yezigidi kutshanje enikezwe ngurhulumente waseJamani noRhulumente waseHesse khange ibandakanywe kwimbono yangaphambili. Ukubandakanya le mpembelelo, ibhodi yesigqeba ngoku ilindele ukuba iQela le-EBITDA kunyaka wonke lihle phakathi kwe-460 yezigidi ukuya kwi-610 yezigidi zeerandi (ehlaziyiweyo ukusuka phezulu phakathi kwe- $ 300 yezigidi ukuya kwi- € 450 yezigidi, njengoko kuqikelelwe kwiNgxelo yoNyaka ye-2020 yeFraport). Imbuyekezo iya kuba nefuthe elihle kwiQela le-EBIT, ebelikade lilindelwe ukuba libi kancinci kodwa ngoku liqikelelwa ukufikelela kwindawo elungileyo. Uqikelelo lwangaphambili ukuba alunabungozi, iziphumo zeQela (inzuzo iyonke) ngoku kulindeleke ukuba ibe kuluhlu olusuka kancinane ukuya kwinto encomekayo.
IsiTshayina Xiaomi Dethrones Apple njengesiBini seHlabathi ...
Amaqhosha asentshona arhoxisa iParade yePasika ka-2021
I-Suite kangakanani kwiiSandals Luxury Resorts
American, Spirit, Southwest Airlines: Kwenzeka ntoni ...
Ezona ndlela zintle zokuhombisa iinwele eMntla Merika: Dibana nee-stylists
Iindawo ekuchithelwa kuzo iiCuracao Sandals® Resorts zikulungele ukubhukisha nge ...
Ukuqhuma kwe-COVID e-Afrika: i-US $ 7.7 yezigidi zezigidi kwihlabathi liphela ...
I-Malta Ngoku Yamkela amakhadi okuGonya aseMelika
Ngaba ikhuselekile eParis ngoqhanqalazo olukhulu kunye ne-COVID?
Umboniso waseBahrain kunye neZiko leNgqungquthela linento entsha ...
Umbutho wezoKhenketho weHlabathi (i-UNWTO) unethuba elitsha ...
Unobhala omtsha wase-India we-Ofisi yoMphathiswa Wezokulwa ...
Ukuya eSaudi Arabia kuKhenketho ukuba u ...
Ukhenketho lwase-UK kunye nezoKhenketho: Ingxelo ye-COVID Impact Report
UBilly Bishop waseToronto kwiSixeko saseKhanada esiQalisa ukuThengisa ...
Ingqungquthela ye-IGLTA yeHlabathi eza kubanjelwa eMilan nge-26 ka-Okthobha ...
Umdyarho ngoku wokuBaluleka kwamaXesha oPhumo loBhubhane: IMEX ...
Umhlaza Webele: Unganceda njani uVerzenio?
ENepal: Iphupha lomfoti wesitalato
I-San José ukuya eReno-Tahoe moya kwi-Southwest Airlines ...
I-India Aviation: Ii-Airlines ezintsha kwiHorizon
Indawo yabucala inikezela nge- $ 2 yezigidi kwiCaribbean naseAsia
I-Airways yoMzantsi Afrika yazisa ngeSigqeba esitsha soLawulo
Imozulu kunye noxinzelelo lwezoQoqosho ngoku kuKhenketho oluhlaza ...
Abona baThengisi bakhulu kwinyanga yokuqala yePhuket ...
I-Bahamas iveza i-2nd yayo eyi-Virtual Junkanoo yehlobo ...
NgoSeptemba imibhiyozo yokuzingca ilawula eMalta, ifihliwe ...
IWashington DC Capitol Hill yafuduswa emva ...
Le Bear emnyama yaseAsia ithanda uOmetelet, uFacebook, kunye ...
IAeroflot ithumela inqwelomoya eMexico, Jordan, Dominican ...
Kuphela li-10% kwiimoto ezibhiliyoni ezikhuselekileyo
USuku lweLizwe kuBukumkani obutsha base-Saudi Arabia buya ...
I-Taliban: Ngabantu bamanye amazwe kuphela abanokushiya i-Afghanistan ...
I-Carnival ukuze isebenze kwi-75% yeFleet Capacity ngokuphela kwe ...
I-Express Train esuka eMunich ukuya ePrague yaphahlazeka ngokubulala ...
IGLTA inyula uSihlalo wokuqala waseColombia kwiBhodi ye ...
IHollywood Star uJane Powell kunye neGolide yeGolide yeFilimu ...